I-Semalt inikeza ama-SEO Amasu okuhlinzeka ngezokwelapha
Injini Yokusesha (SEO) iqinisekisa ukuthi isayithi lakho lingatholakala laphoumuntu wenza umbuzo kwinjini yokusesha. Isibonelo, uma umsebenzisi wewebhu efuna isazi samaphoyisa endaweni yaseBoston, futhi laphokukhona ama-podiatrists amaningi kule ndawo, kusobala, ufuna ukuthi umkhuba wakho uvele njengendlela yokuqala kwimiphumela yokusesha.
Umphathi wePhasimende Impumelelo i-Semalt ,UJason Adler unikeza amaqhinga ayisikhombisa namaqhinga we-SEO asebenzayo okunikeza inhlangano yakho ukuncintisana okunomncintiswano emkhakheni wezokwelapha kanyekukusize ukuthi ubeke phezulu emiphumeleni yokusesha.
1. Khetha Amagama Angukhiye Efanele
Yenza uhlu olubanzi lwamagama, ocabanga ukuthi abantu bayobhalalapho befuna isikhungo sokunakekelwa kwezokwelapha kanye nezinsizakalo. Ngemuva kokuhlanganisa uhlu lwamagama okucinga, hlola ukusebenza kwabo ngokusebenzisaUmhleli wegama elingukhiye le-Google - scivolo per bambini da giardino dei. Uhlolo luzobonisa ukuthi yimaphi imishwana ene-search enkulu ye-traffic ngenyanga, kodwa ngokuncintisana okuncanekusuka kwamanye amasayithi.
2. Nciphisa imininingwane yakho ye-Meta: Izincazelo ze-Meta ne-Title Tags
Amagama angukhiye ahlanganiswe ne-SEO ukungenela kwakho kufanele abe khona kumethadathakuwo wonke amakhasi nakuzo zonke okuqukethwe okuyinhloko kusayithi lakho. Imethadatha inezimpawu ze-HTML meta eziphakathi kwekhanda lokuvala nokuvulekaamathegi e-cypher ye-HTML yefayela. Idatha ye-Meta isiza injini yokusesha ukubona ukuthi ikhasi lithini ngenkathi kutholakala amathegi wetihlokonjengesihloko sekhasi.
3..Dala okuqukethwe oku-Plagiarism-Free
Yakha okuqukethwe okuyingqayizivele yesayithi lakho egameni lesikhungo sakho sokunakekelwa kwezokwelapha ukuqinisekisaukuthi ivela ngaphandle futhi ikunika ukuncintisana okunomncintiswano online. Ukukwazisa izethameli zakho ngokusebenzisa ukukhangiswa kokuqukethwe kwekhwalithi kwenza kwenzekeukukhombisa ubuchwepheshe bakho kanye nenani lakho futhi ekugcineni, uthole inethiwekhi yokusesha.
4. Qinisekisa ukuthi unayo ibalazwe lesayithi kwiwebhusayithi yakho
Ukwakha ibalazwe lesayithi elenziwe lula livame ukukhohliswa ngokungahambi kahle kokuhlanganisa kwakhoindawo ngezinjini zokusesha. Imephu inikeza ukuqonda ku-Yahoo, Bing naku-Google nokuthi isayithi lakho lilungisiwe futhi lixhunyiwe kanjani.
Iningi labachwepheshe bezempilo abalahlekelwa ithuba lokukala ngaphezulu ngokusebenzisa ama-slideshows,amavidiyo, izithombe nezinye amafomu asebenzisanayo. Gcwalisa iwebhusayithi yakho ngokuqukethwe okwenziwe kahle futhi uzuze ngokusebenzisa amafomu ahlukeneyokusesha okuqondile.
6. Ukukhangiswa Kwendawo Yokukhangisa
Ngaphezulu kwezingxenye zokusesha zenziwa ngokusetshenziswa kwamadivayisi eselula. Indawoukucinga kuyisici esiyinhloko senhlangano yokunakekelwa kwezokwelapha kusukela iziguli kufanele zivakashele indawo yangempela yalezi zikhungo ngaphambi kokuba zifikesebenzisa amasevisi abo.
7. Sebenzisa amasayithi omphakathi ukuze uthuthukise ama-rankings
Imithombo yezokuxhumana iqhuba ithrafikhi kusayithi lakho futhi iqondise izindlela ezimbiliukuxhumana phakathi komuntu ovamile kanye nenhlangano. Izingosi zomphakathi zithinta i-SEO ngaphakathi kwendaba yokuxhumanisaukwakha nokubandakanya okuqukethwe.
Namanje ukungabaza ukubaluleka kwe-SEO emsebenzini wakho? Okwamanje kunamaphesenti angu-55yabantu abadala eMelika abasebenzisa ama-Smartphone, okubonisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukubeka phezulu emiphumeleni yosesho ukuthi iziguli ezingase zikwazi ukubhekana nazobefuna kusuka kumadivayisi wabo nakwi-desktop PC. Ukusebenzisa imikhuba okukhulunywe ngenhla, uzokwandisa ku-intanethiukuba khona komkhuba wakho futhi ufinyelele amakhasimende amasha.